Biodiversity Vision - SO
Himilada noolaha kala duwanaanshuhu waa cad yahay:
⚫ xaqiiji noolaha
oo leh tallaabooyin la taaban karo ...
Kuma filna in la qaato waxoogaa talaabooyin wanaagsan ah sida samaynta qeybo yar oo wabiyaal ah ama qaabaynta dhul leh adeegsi aad u yar. Waxaan u baahanahay in aan qoondayno / iibsanno dhul si aan u sameysanno dariiqyo cagaaran laga soo bilaabo j hoose ilaa mid sare, koonfurta ilaa waqooyiga - tusaale. in la fududeeyo u guurista noocyada kaladuwan ee loogaga hortagayo isbedelka cimilada - iwm.
⚫ ku saleysan sayniska
maaha siyaasad ...
Waa inay noqotaa muuqaal guuleysta. Dhul badan oo loo qoondeeyey dabeecadda duurjoogta ah ayaa loogu talagalay dhammaan noocyada ay ka mid yihiin aadanaha.
Soo uruurinta lacag ku saleysan doorka siyaasadeed ama mashruucyo horey loo maalgeliyey ama runtii aan macno samaynayn ma dhici karto.
Horaa u cadahay in saynisyahano badankood ay qabaan fikirka ah inaanan ku filneyn inaan badbaadino noolaha. Si kastaba ha noqotee, dhammaantood may wada oggolaanin qorshaha saxda ah ee tallaabada la qaadayo. Macquul ayey noqon doontaa in ilaha la geliyo mashaariic kala duwan oo kaladuwan. Mid ka mid ah mashruucan ayaa ah in la dhiso harooyinno yar yar oo jasiirado leh si shimbiraha loogu beddelo inay ku soo noqdaan oo ay dhalaan.
Maahan su’aal ah in lagu arko in wax la qabto laakiin runtii badbaadinaysa dhirta iyo xayawaankaas.
⚫ iyo balan qaad
2% GDP ...
Umadaha qaar ayaa leh himiladooda ah in ay 2% ka qaataan Dakhliga Qaranka (Gross House Product Product) difaaca. Difaaca noolaha meeraha ma ahan mid muhiim ah. Waxaan sheeganeynaa 2% GDP hormarinta iyo ilaalinta noolaha.
Ma awoodi karno inaan sugno, sidaa darteed qorshuhu waa inuu noqdaa mid deg deg ah, halkii si tartiib tartiib ah aan u kordhin laheyn qarashka sanadaha x.
Si loo tiriyo himiladaa 2%, waxay u baahan tahay inay noqoto mashruuc la aqoonsan yahay oo aan salka ku haynin siyaasada, sida aan kor ku soo sheegnay.
Fadlan dhagsii fallaaraha yaryar ee ˅ ˄ ee kore dhanka midig si aad u tusto ama u qarsato qoraalka dheeriga ah ⬆️
La wadaag xiriirkeena qof walba www.biodiversity.vision